I and matesar villag by zawlin htwe - issuu
ကျွန်ုပန်ငှ့် မိစ္ဆာရွာ ( အပိုင်း ၁)
(၁) ကရင်ပြည်နယ် ဇွကဲပင်တောင်ခြေနှင့် မိငု ၂၀၀ မျှဝေးသောနေရာတွင် လူသအူရောက်အပေါက်နေဲသာ ရွာ ကလေး တစ်ရွာ ရှေိလသည် ။ ရွာကလေး၏ မူလအမည်မှာ စောကလုံ ရွာ ဖြစ်၏ ။ အချိနက်ာလ ကြာမြင့် လာ သော အခါ စောကလုံရွာ ကလေးအား မည်သတူစ်ဦး တစ်ယောက်ကမျှ စောကလုံရွာ ဟု မခေါ်ကြတော့ပဲ မိစ္ဆာရွာ ဟုသာ ခေါ်ဝေါ်ကြလေသည် ။ စင်စစ် မိစ္ဆာ ရွာကို ခြုံကြည်ရ့လျှင်
လူသအူရောက်အပေါက်နည်းသော ချိုင့်ဝမှ်း ထဲတွင် တည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ရွာတောင်ဖက်တွင် စမ်းချောင်းလေးတစ်ခု ရှိ၏ ။ ထိစုမ်း ချောင်း လေးကို ရွာသားများက ငှကမ်လွတ်ေချာင်း
ဟုခေါ်တွငြ် ကကုန၏်။ နွေရာသီနငှ့် ဆောင်းရာသီတငွ် တည်ငြိမေ် အး ဆေးသလောက် မိုး ရာသီတငွေ်ဒါမာန်ကြီးစွာဖြင့် စီးဆင်းတတ်သောကြောင့် ချောင်းပေါ်မှ ဖြတ်ပျံသော ငှကပ်င်
မလွတပ်ေဲသရသည်ကို အစွဲပြု၍ ငှကမ်လွတ်ချောင်းဟု ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည် ။ ရွာ၏အနောက်ဖက်တငွ် တောကြီး မျက်မည်းသာရှ၍ိအရှေဖ့  က်တွငမ်ူ ကိငုး ပင်များစိကုပ်ျိုးခြင်းကို လုပက်ငိုကြလေသည် ။
ရွာမြောက် ဖက်တငွမ်ူ ကြီးမားလှသော တောင်စယ်ွတောင်တန်းများဖြင့် ပြည်န့ကှလ်ျှက်ရှေိ ပသည် ။ ထြို မင်ကငွ်း များသည် မိစ္ဆာ ရွာအား အပေါ်မှ စီးကြည်လျှ့ င် ချိုင်ဝ့မှ်း ပတ်လည်တငွ် မြင်ရသော အရာများပေတည်း ။
ထူးဆန်းသည်မှာ မိစ္ဆာ ရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမရှိပေ ။ ဘုန်း ကြီးကျောင်းမရှ၍ိအခြားဘာသာ ကိုးကွယ် သလား ဟု မေးရအောင်လည်း မည်သည်က့ိးု ကွယပ်ေူဇ်ာပသမှုမှ မရှေိပ ။ ပကတိ အရိုး ခံလမျူားသာ
ဖြစ်ကြလေ ၏ ။ စောကလံရွုာ လေးအား မိစ္ဆာရွာဟု အမည်တငွေ်စသော အရာများကား ဤသိတု့ ည်း ...။ (၂)
ညအမှောင်ယကာံး မဟူရာ ပိတက်ားချပ်ကြီးနှယ.် . ။ ပိန်းပိတ်ေအာင်မဲမှောင်နေ၏ ။ မိစ္ဆာရွာလေးတွင်
လူသံ မဆုထိားနှင့် ခွေးအူးသံ ပင်မကြားရလောက်အောင် တိတဆ်တြိ် ငိမသ်က်လနွ်းနေ၏ ။ ညဉ်င့  ကှ် အော်သံ များကိကုား တခါတရံမသှာ ကြားရတတ်၏ ။ ထိုအခိကု ရွာအလယ်ခေါင်တငွ် အမှောင်ထကုခို ငွ်း ၍ မီးတုတမ်ျား ကိင်ုဆောင်ထားကြသော ရွာသားငါးဦးတိသု့ ည် ၀ါးလုံးများကို လျှို၍
လူသေအလောင်းတစ်လောင်းကို ထမ်းကာ ရွာမြောက်ဖက်သုိ့ ဦးတည်၍ သွားနေ၏ ။ " သေချာထမ်းပါကွာ ဖိုးခွားရ မင်းဟာက တဖြည်းဖြည်းလေးလာပြီ " " အေးကွ စောလွငရ်
ဒီအလောင်းကလည်း တဖြည်းဖြည်းလေးလာတယ်ကွ သွကသ်ကွေ်လး လျောက်ရ အောင် ကွာ " အထက်ပါအသံများ ကြားရပြီးနောက် ခြေသံများမှ အပမည်သည်အ့သံမျှ မကြားရတော့ပေ ။ မိစ္ဆာ ရွာတွင် သင်္ချိုင်းကုန်း မရြှိ ခင်း ပင်ဖြစ်၏ ။ ရွာသားများသည် လူသေလျှင် ရွာ၏ မြောက်ဖက်တွငရ်ှေိ သာ တောင်စယွ် တောင်ကလပ်များပေါ်တွင် ငှကစ်ာအလိငု့ှာ အလောင်းများကို လာ၍ ပစ်ကြလေ၏ ။ ယခုလည်း ရွာထဲရှိ လူသေ အလောင်းတစ်လောင်းအား ညဖက်ကြီးသွား၍ ပစ်ကြဟန်တ၏ူ။ တဖြည်းဖြည်းနှင့်
တောင်ကလပ်များနှင့် နီးလာ လေသည် ။ ရွာသားတစ်ဦး က အလောင်းတင်ရန် တောင်ကလပ်အား လိကုလ်ြံ ကည်ရှူ့လေသည် ။ အချို့ကျောက် တောင်များပေါ်တွင် လူအရိုး စုများကို အများအပြားတွေရ့  လေသည် ။
" ကဲဖိးု ခွေးရေ ဒီကသို ယ်လာဟေ့ ဒီမှာ လွတတ်ယ် ဒီနေရာမှာပဲ ထားခဲမ့ယ်ဟေ့ " " ဟုတက်ဲ့ ဟုတက်ဲ့အဘ " ပြောပြောဆိဆို ရွာသားလေးယောက်သည် အလောင်းကြီးအား မနိငုတ့် နိငုထ်မ်း၍ တောင်ကလပ်ပေါ်တွင် တင် လိကု လေသည် ။
" အားပါး အတော်လေးသကွာ ၂ ယောက်စာမိထု့ င်တယ်ကွ " " အေးကွာ နန်းမူသနားပါတယ် သူခ့  မျာ မီးမဖွားနိငုလ်သို့ာသေရရှာတာ အသက်ကဖြင့် ငယ်ငယ်လေး ရှိသေး တယ် " ထိသုို့ပြောဆိုပြီးနောက် ဖိုး ခွားက အလောင်းအားကြည်လ့ကိုရာ " အောင်မလေး " " ဘာဖြစ်တာလည်းဟ " " ဟိ.ု ..ဟိုမှာ မျက်လုးံ ကြီးပွင့်နေတယ် " " အာကွာ ဒါများ အဆန်းလုပလ်ို့ ပြန်ပတိလ်ကိုရသားနဲ့ "
ပြောသာပြောလိက်ုရသော်လည်း စောလွင်ကျောရိုးတလျောက် ကြက်သီး ထသွားမိလေ၏ ။ အလောင်းကို နေရာ တကျထားပြီး ငါးယောက်သား ပြန်လညှထ့် ကွလ်ာခဲ၏့။ ခပ်လမှ်း လှမ်း အရောက်တငွ်
နောက်မအှသံကြား၍ ငါး ယောက်သား ပြိုင်၍ လှညြ့် ကည်လ့ကိုရာ အလောင်းကောင်ကြီးကို စားသောက်နေဟန်ရှေိ သာ မဲမဲ သဏ္ဍာန် ကြီးကို တွေလ့  ကိုြ် ကရလေတော့သည် ။ " သ...သရဲ... အောင်မလေး... သရဲဗျို့... သရဲခြောက်တယ်ဗျို့.." " ကယ်ကြပါဦးဗျ သ...သရဲ "
အသံမျိုးစံေုအ်ာဟစ်ပြီး ငါးယောက်သား ရွာဖက်ဆသီုိ့ ဦးတည်ပြေးလွှားလာခဲ၏့။ ရွာသိေု့ ရာက်သော် မောပန်း နေပြီဖြစ်၍ တော်တော်နငှ့် စကားမပြောနိငုေ်သး ။ အမောပြေတော့မှ သူတထုိ့ တဲငွ်
အသက်အကြီးဆံုး အဘဦး ဟန်သာက အကျိုးအကြောင်းပြောပြလေသည် ။ တစ်ကြိမတ်စ်ခါမျှ မကြုံဖူး၍ ရွာသားများစိတထ်တဲငွ် သို့လော သို့လော နှင့် တွေးတောကြောက်ရကွံ့ နြု ကလေတော့သည် ။ ရွာပတ်ဝန်းကျင်တငွက်ား အမှောင်ထသုည် တိတ ဆ်တိ် စွာ ဆက်လက်ကြီးစိုးလျှက်.... ။ (၃) နံနက်မိးု လင်းသည်နငှ့် ရွာသူကြီးက သရဲခြောက်ခရံသော ရွာသားငါးယောက်အား ခေါ်ဆောင်လျှက် ရွာမြောက ဖ်က်ရှိ ကျောက်ကလပ်များ ရှရိာသို့ သွားရောက်ကြည်ရြှူ့ ကလေသည် ။ ဘုရား...ဘုရား.... သူတုိ့ ညက တင်ထား ခဲသေ့ာ အလောင်းကောင်ကြီးက လတ်တလောအသားများကို နွှာ၍ စားသောက်ထားသည့်နယှ် ။ အရိုး စုလေး သာ ကျန်ရစ်တော့သည် ။ သွေးများကား
မြင်မကောင်းလောက်အောင် ရွှဲစေို န၏ ။ လူသေထားသည်မှာ ၂၄ နာရီ မပြည့်သေး၍ သွေးများက ခဲမနေပဲ အိငုထ်နွ်း နေတုန်းရှေိသးသည် ။ ရွာသားများလည်း အဖြေရှာမရပဲ ညည်းငြူကြလေသည် ။ " အေးကွ တိရွု့ာမှာ ဒါမျိုးတစ်ခါမှ အရင်တနုး ကမ ဖြစ်ဖူးပါဘူး ငှကစ်ားရအောင်လည်း ဒီလောက် မြန်မြန်ကနုန်ိုငမ်ယ်မထင်ဘူး ..ကဲ ငါတို့ ပြန်ရအောင်ဟေ့ "
အပြန်လမ်းက တိတဆ်တိေ်ခြာက်သွေလ့ွန်းနေ၏ ။ သူတထို့ ကွခ်ွာသွားရာသို့ မျက်လုးံ နီနြီ ကီးတစ်စကုံ ချောင်း မြောင်း ကြည်ရ့ှေူ နသည်ကမိုရွာသားများ မသိလကို ပ်ါချေ ။ နွေခေါင်ခေါင်မို့ အပူကား တလျှပ်လျှ ပ်နှငအ့် စွမ်း ကုနပ်ြူ ပင်းနေ၏ ။ ရော်ရကွဝ်ါတိကု့ သစ်ပင်ကြီးများဆီမှ တ ဖျောက် ဖျောက် ကြွေဆင်းလျှက် ရှကိနု၏်။
" အား..ဗိကုေ်အာင်တ့ယ်အမေရေ..လုပပ်ါဦး " " ဟဲ့ နင်မချစ်ဥ ပြုတ်ရည်သောက်ထားတယ်မဟုတလ်ား တကတည်း " " အား..မနေနိုင်ေတာ့ဘူး အမေရ ဗိကုက်ထိုး အောင်လ့ာပြီ အန်လည်း အန်ချင်တယ်..ဝေါ့.."
ပြောပြောဆိဆို အန်ချလိကုေ်သာ သမီးဖြစ်သူ အေးမေကြောင့် အမေဖြစ်သူ စိတပ်ပူန်သွားသည် ။ ခက်သည်က သူတရုွိ့ာ တွင် ဆရာဝန်မဆုထိားနှင့် ဆေးမှူးပင် အရောက်အပေါက်နည်းလှသော အလွန်ေခါင်သည့် ရွာပင် ဖြစ်သည် ။
" ဟဲအေ့းမေ...နင် ဟိတုနေ့က ဒေါ်အုဇိာနဲ့ ရန်ဖြစ်ထားတယ်ဟတု မဟုတမ်ှ လွေဲရာ ညည်းကို ဟိကုပြုစား လိကြု ပီ ထင်တယ် ငါအတန်တန်မှာထားရဲ့နဲေ့  အ.. ဟိတုလောကတင် သူနဲ့ မတည်တဲ့ နန်းမူတောင် မီးမဖွားနိငု လို့ သေသွားတာ ဘာကြာသေးလိတု့န်း ညည်းအေ မဖြစ်သေးပါဘူး သူက့ို
သွားတောင်းပန်လကို" " အို ဒီအဖွားကြီးကို ဘာလို့ တောင်းပန်ရမှာတုန်း မတောင်းပန်နငို ပ်ါဘူး "
စိတပ်ပူန်စွာ ပြောနေသော မိခင်ဖြစ်သကူို ပြန်လည်ပြောဆိရုင်း သူမအန်ထားသော အောက်ကို ငြုံ့ ကည်လ့ကိုေ် တာ့ " အား..." စူးရှစွာ အော်လကိုေ် သာ အသံကြောင့် မိခင်ဖြစ်သကူပြေးပြီး လာကြည်လေ့သည် ။ " ဟဲ့ ...ဆံပင်ချည်တွေပါလား အောင်မလေး ကယ်ကြပါဦးတော့ " အော်ဟစ်လကိုေ် သာ အသံကြောင့် အိမန်ီး နားချင်းများ လာေ၇ာက်ကြည်ရြှူ့ ကရာ ခဏတွင်း ပင် လူအပြု ကီး ဖြစ်သွားလေသည် ။
" ဟဲ့ ပြုစားခံရတာ ဟဲ့ " " ဒေါ်အိဇုာကြီး လက်ချက် ဖြစ်မှာ ပေါ့အေ " " အိေုအ သူက အဲဒေီလာက်တောင်စွမ်း လိလု့ား " " စွမ်းလိပုဲ့နန်းမူ ကိယ်ုဝန်ကြီးနဲ့ သေသွားတာ မတွေဘ့ူး လား " ရွာသူရွာ သားများကား တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ပြောဆြို ကကုန၏်။ ထိသို့ ဖြင့် ရက်များက တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် ကုနဆ်ုးံ လာခဲသ့ည် ။ တစ်ပတ်တတြိ ပည်သေ့ာနေ့တငွ် အေးမေ တစ် ယောက်ကား ဗိက်ုအလွနအ်မင်းအောင်က့ာ သွေးများဆင်းပြီး
အသက်ပါဆံုး ရလေတော့သည် ။ ရွာသူရွာ သားများ၏ စိတထ်တွဲငက်ား စုန်း ၊ ကဝေ အတတ်
ပြုစားခြင်းအတတ်ကို အလွနအ်မင်း ယြုံ ကည် သွားကြ လေတော့သည် ။ ရွာထဲတွင် ပြုစားခြင်းအတတ်ကို တက်ကြသူများမှာ ဒေါ်အိဇုာတစ်ဦး တည်း မဟုတ်ေပ ။ လူ ၁၀ ယောက်ခန်မ့ျှ စုန်း အတတ်ကို
တတ်မြောက်ကြသည်ဟု အယူရြှိ ကလေသည် ။ ထိသို့ စုန်း အတတ်ကို တက်သူ များနှင့် ရန်မဖြစ်ရအောင် နေကြရလေသည်။ ထိသုမို့ ဟုတပ်ါက အသက်ဆုးံ ရှုံးသည်အထိ ဖြစ်နငိုပေ သည် ။ တခါကလည်း အေးမေသေဆံုး ပြီး နောက် ၃ ရက်မြောက်နေ့တငွ် ရွာထဲရှိ ဒေါ်သူဇာနှင့် ကိုဖိုးခွေးတို့ စကားများ
ရန်ဖြစ်ကြလေသည်။ ဒေါ်သူဇာကား အောက်လမ်းပညာကို တဖက်ကမ်းတက်သည်ဟု အယူရြှိ က
လေသည် ။ ထိသုစို့ ကားများပြီး နောက်တစ်ရက်တငွ် ကိဖုိးု ခွေးကား ပိုး ထိ၍ သေဆံုး ရလေ၏ ။ ဤသို့ လူများ တစတစ သေဆုံးဖန်များလာသောအခါ စောကလံရွုာ ကလေးအား လူများက မိစ္ဆာ ရွာဟု ခေါ်တွငြ် က ကုန်ေလ တော့သည် ။ (၄) အထက်ပါ အဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ပျက်ပြီး နှစလ်ခန်ြ့ ကာသောအခါတွင် မိစ္ဆာ ရွာသို့ လူနစှဉ်ီး ရောက်ရလှိာလေသည် ။ တစ်ဦး မှာ ဒေါက်တာ နိငုေ်ဇ်ာဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဦး မှာ ကျွနပ်ုပင် ဖြစ်လေသည်။ ဒေါက်တာ
နိငုေ်ဇ်ာမှာ အထူးကုဆရာဝန်တစ်ဦး ဖြစ်သော်လည်း ဆရာဝန်များပေါများသော မြို့ကြီးပြကြီးများတွင် မနေပဲ ကျေးလက် တောရွာများသို့ လှညလ့် ည်ဆေးကုနေသော ဆရာဝန်တစ်ဦး ဖြစ်ပေသည် ။
ဒေါက်တာနိင်ုဇော်မှာ စွနစ့်ားသွား လာရခြင်းကို လွနစ်ွာ ၀ါသနာပါလှပြီး တိကုရ်ည်ခကို ရ်ည်နငှ့် ပြည်စ့ေုံ သာ လွနစ်ွာ ဗဟုသတုနှင့် ပြည်စ့ေုံ သာ ၊ ယောင်္ကျား ပီသလှသော ကိယုခ်န္ဓာအချိုးအစားကို
ပိငုဆ်ိုငထ်ားသူဖြစ်၏ ။ သူသည် လူနာနှငေ့် တွလ့ျှင် နူးညံ့ သော ဆရာဝန်တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ရန်သနူငှ့် တွေလ့ျှ င် ရက်စက်တတ်သော ကျားရဲတစ်ကောင် အသွငရ်ှိ လေသည် ။ ကျွန်ုပသ်ည်ကား
ထူးဆန်းအြံ့ သဖွယရ်ာများကို ၀ါသနာပါလွန်းသည် ဖြစ်၍ ဒေါက်တာနိငုေ်ဇ်ာနှင့် အတွမဲကိာ
မြန်မာပြည်တစ်ဝမှ်း လှညလ့် ည်သွားလာနေကြခြင်း ဖြစ်၏ ။ ထြုိ့ ပင် ကျွနပ်ု သ်ည်လည်း စွနစ့်ားဝံသေ့ာ ရဲရင့် လှသော ဆရာဝန်တစ်ဦး ဖြစ်သည်ကမိုအထူးဖော်ပြရန်လမို ည်မထင်ပေ ။ ကျွန်ုပတ်ို့ နှစဉ်ီး ရောက်ရောက်ခြင်း မိစ္ဆာရွာကလေးအား တိတဆ်တိေ်ခြာက်သွေေ့  နလေ၏ ။ ထိုအခိကု လူလေး ယောက်မှာ စောင်နှင့် ပတ်ထားသော အရာတစ်ခကို ၀ါးဖြင့် လျှို ထမ်းကာ ရွာမြောက်ပငိုးသို့
သုတသ်တု သုတ် သုတ် လျောက်သွားလေ၏ ။ ကျွနပ်ု တ်လို့ ည်း လမ်းဖယ်ပေးလိကြု ပီး ရွာလူကြီးအိမသ်ို့ မေးမြန်းစုံစမ်းပြီး သွား ရောက်ကြလေသည် ။ ရွာလူကြီးကား သဘောမနောကောင်းသော လူကြီးတစ်ဦး ဖြစ်လေသည်။ နာမည်မှာ ဦးထွန်းလူဖြစ်၏ ။ " ဒီလပိုါသူကြီး ကျွန်တော်တုိ့ နှစ်ေယာက်က နယ်လညှေ့် ဆးကုနေတဲ့ ဆရာဝန်နစှ်ဦး ပါ နောက်ပြီး တော
တောင် ရေမြေ သဘာဝတွေကို လေ့လာချင်ကြတာနဲ့ ခရီးထွက်ေနကြတာပါ ကျွန်ေတာ်တကိုို့ ဒီရွာ လေးမှာ ခေတ္တခဏ တည်းခို ခွင့် ပြုပါခင်ဗျာ " " အေးဗျာ ဆရာတို့ ရောက်လာတာဖြင့် ကျူပ်တော့ သိပအ်ားရှတိာပဲ ဒီရွာ လေးကို လူတွေက မိစ္ဆာ ရွာလို့
ခေါ်ကြ တယ် စုန်းကဝေ ပြုစားတာတွေ များတယ်ဆြို ပီး တော်ရလုံေူ တွ မလာဝြံ့ ကဘူးဆရာ အင်း.. .ပြော ရမှာတော့ အားနာပါတယ် ဆရာလေးတို့ရယ် လူနာတွေကလည်း အခုတလော တအားများလာတယ်
နောက်ထူး ဆန်းတာ တွေ လည်း ကြုံနေရတယ်ဆရာ " " ဆိစုမ်းပါဦး သူကြီးရဲ့ ဘယ်လထိုး ဆန်းတာတုန်း " "ဒီလဗျိုအခုတလော ရွာမြောက်ဖက်က တောင်ကလပ်တွေမှာ လူသေအလောင်းတွေ ပျောက်
ပျောက်နေ တယ် ဗျနောက်ပြီး ရွာမြောက်ပငိုးက ညိုအေးရဲ့ သားလေးလည်း ပျောက်သွားတယ်ဗျ အခုထိ ရှာမတွေေ့  သးဘူး " " ဟုတက်ပဲ့ါသူကြီး ကျွန်တော်တို့ အတတ်နငို ဆ်ုံး အကူအညီပေးပါ့မယ် ခင်ဗျာ " ကျွန်ုပက်ပြောလိကုေ်သာအခါ သူကြီးက အလွန်အမင်း ၀မ်းသာကာ ကျွန်ုပတ်ို့ နှစဉ်ီး တည်းခိုရန် ရွာထဲရှိ အိမအ်လွတ် တစ်လုးံ သို့ ပိေု့ ဆာင်ပေးလေသည် ။
" ကဲ ..ကိသုက်တန်ေ့  ရ ဒီညတော့ တောင်ကလပ်တွေပေါ်က အလောင်တွေကိစ္စ သွားပြီး စံစုမ်းရအောင်ဗျာ နေ့လယ် က လူတစ်ဦး သွားပစ်ထားတယ်ဆေို တာ့ ဒီည သွားကြည်ရ့င် အဖြေတစ်ခခုတော့ တွေ့မှာပဲဗျ " ဟု ဒေါက်တာနုငိေ်ဇ်ာက လက်စွဲတော်သေနတ်ကို တိကုခ်ျွတရ်င်း ပြောလေရာ ကျွန်ုပက်" သွားကြတာပေါ့ ကိနုငိုဇော်ရယ် ကဲ ကျွန်တော်တလုိ့ ည်း ခရီးပမ်းလာတယ်ဆုေိတာ့ တရေးတမော အိပ် လိကု ကြရအောင် "
ဟုပြောလိက်ုလေသည် ။ ထိေု့ နာက် ကျွနပ်ု လ်ည်း အိမ်ေရှ့ဝါး ကွပပ်စ်လေးပေါ်တက်၍ ဇရက်မင်းစည်းစိမက်ို ခံယူ လိကုေ်လတော့သည် ။ နွေဦး လေရူးကို ကျော်လနြွ် ပီး
မိုး ရာသီရောက်လာတော့မည် ဖြစ်၍ ကောင်းကင်တငွ် သိပ၍်မပူပြင်းပဲ တိမမ်ျားက အံဆု့ ငိုး နေ၏ ။ လေတဖြည်းဖြည်းနှင့် အိပလ်ကို ရ်ာ မကြာမီ အိပ်ေပျာ်ခြင်း သို့ ရောက် လေတော့သည် ။ (၅) ညနေရီတရော နွားရိငုးသွင်း ချိနမ်ို့ ကောင်းကင်က လိမ္မောေ်ရာင်ဖက်သုိ့ သန်းနေ၏ ။ မကြာမီနေ၀င်ကာ လော ကတစ်ခငွ် အမှောင်ဓါတ်က ကြီးစိုး ပေတော့မည် ။ ကျွနပ်ု တ်လို့ ည်း
စကားတပြောပြောနှငေ့် လျာက်လာရာ မကြာ မီ တောင်ကလပ်များ ရှရိာသို့ ရောက်လာခဲတေ့ာ့သည် ။ နေက လံုး ၀၀င်သွားပြီ ဖြစ်၏ ။ ထုေိ့ နာက် ဒေါက်တာ နုငိေ်ဇ်ာကား သူ၏ သေနတ်ကို အဆင်သင့် ကိငုထ်ားပြီး ကျောက်ကလပ်များ ရှရိာသို့ တဖြည်းဖြည်းလှညလ့် ည် ကြည်ရ့ှေူ န၏ ။
အချို့ကျောက်တောင်များပေါ်တွင် လူသေအလောင်းများပင် မတွေရ့  တော့ပဲ အရိုး စုများသာ
တွေရ့  လေသည် ။ အချို့ကျောက်တောင်များအပေါ်တွငမ်ူ အရိုးပင်မတွေရ့  တော့ပေ ။ ထိအုခိကု အစွနဖ်က်ရှိ ကျောက်ကလပ်ပေါ်တွင် မဲမသဲဏ္ဍာန် တစ်ခကို တွေလ့  ကိုရ၍ ကျွနပ်ု တ်ို့ နှစဉ်ီး ကား တိုး ကပ်၍
သွား ကြည်ြ့ ကလေသည် ။ ကျောက်ကလပ်ပေါ်တွငတ်င်ထားသော အရာမှာကား အလောင်းကောင်ကြီးပင် ဖြစ်လေ၏ ။ ထိုအလောင်းကောင်ကြီးကား အတွင်း ကလီစာများ မရှေိတာ့ချေပြီ ။ အူများပွငထ့် ကွ၍်တစ်စတုံ စ်ဦးက စားထားသကဲသို့ ရုပပ်ျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်နေလေ၏ ။ ထိုအခိကု ကျွန်ုပတ်ို့ နှစဉ်ီး ကျောဖက်မှ အသံဗလံများ ကြားလိကုရ်၍ နှစဉ်ီး သား ကျောက်ဆောင်အကွယသ်ို့
အမြန်ပနုး နေလိကုရ်လေသည် ။ အလိ.ု ...မြင်လကို ရ်သော မြင်ကွင်း ကား အလွနပ်င် အော့နလှုးံ နာဖွယ်ရာ ကြောက်မက်ဖယွ် ကောင်းလှတော့သည် ။ အပိငုး (၂)ကို ဆက်လက် စောင်မှေျ့ာ် ဖတ်ရြှူ ကပါရန် ။
ကျွန်ုပန်ငှ့် မိစ္ဆာရွာ ( ဇတ်သမိ်း ပိငုး )
မဲမသဲဏ္ဍာန်ကြီးသည် လူအ့  ရပ်ထက် လွနစ်ွာ မြင်မ့ားထွားကြိုင်းပြီး ခန္ဓာကိယုတ်စ်ခလုံးက အဖုအပိမမ့်ျား ထွက် နေလေ၏ ။ မျက်နှာကလည်း အထွတအ်ထွတ်နငှ့် ကြောက်မက်ဖယ်ွရာ သဏ္ဍာန်ရှေိ လသည် ။
ထိမုနုသာ လူဘ့ီလူးကြီးက အလောင်းကောင်ကြီးအား ဓါးနှင့် စိန်ေပြနပြေ ခွာယူစားသောက်နေလေသည် ။ ကျွနပ်ု တ်ို့ နှစဉ်ီး လည်း ဆက်လက်၍ မပုန်း အောင်းတော့ပဲ လူဘ့  လီူး ကြီးရှရိာသို့ ထွကလ်ကိုေ် လတော့သည် ။ " ဟေ့ ရပ်လကိုစမ်း ခင်ဗျားဘယ်သလူည်း မလှုပန်ဲ့ " ဒေါက်တာ နိုင်ေဇာ်က သေနတ်နငှ့် သေချာစွာ ချိနရ်င်းပြောလေသည် ။ လူဘ့  လီူး ကြီးကား လျှင်မြန်စွာဖြင့် ၄င်း၏ ဓါးနှင့် ကျွနပ်ု တ်ို့ ရှရိာသို့ ပစ်ပေါက်လကိုေ် လသည် ။ " ၀ှစ် " " ဒိငုး " ဓါးပစ်လကိုေ် သာ အသံနငှ့် ဒေါက်တာ နိုင်ေဇာ်၏ သေနတ်သတံမုိ့ှာ တစ်ထပ်တည်း ကျသွားလေသည် ။ (၆) ဒေါက်တာနိင်ုဇော်ပစ်လကိုေ် သာ ကျည်ဆမှာံ လူဘ့  လီူး ကြီးအား ထိသွားဟန်တန်သည် ။ လူဘ့  လီူး ကြီးမှာ ယိငု ထွက် သွားပြီး နောက် ကျောက်ကလပ်များ နောက်ဘက် ပုန်း အောင်း
ပျောက်ကယွသ်ွားလေတော့သည် ။ ကျွန်ုပ် တို့နစှဉ်ီး လည်း အမှောင်ထတဲငွ် ရန်သအူား ဆက်လကိုြ် ခင်းသည် လွနစ်ွာ မိကုမ်လဲသှည်ဟု ယူဆကာ တည်း ခိုရာ အိမသ်သို့ာပြန်ခေဲ့ လတော့သည် ။ " ဒီကောင်ကြီးက လျှင်တော့ အတော်လျှင်တယ်ဗျ ဒီကောင်ကို့ ထိသွားတာတောင် ပျောက်သွားတယ် တောက် .. တစ်ချက်တည်း မထိလကို တ်ာ နာတယ်ဗျာ " " ဟုတတ်ယ်ဗျို့ ကိနိုင်ေဇာ်ရေ နောက်တစ်ခါဆိရုင်တော့ ဒီကောင်ကြီးကို အပိငုဖ်မ်းရမယ်ဗျ "
ကျွန်ုပတ်ို့ လည်း ပြောပြောဆိဆုို အတွေးနယ်ချဲေ့  နမိလေတော့သည် ။ ညက အိပ်ေရးပျက်သွားသောကြောင့် နေအတော်မြင်မှ့ ၂ ယောက်သား နိုး လာကြလေသည် ။ ထိအုခိကု " ကယ်ကြပါဦးဗျို့ ဒီမှာ ထွေးညို သတိလစ်သွားလိဗျုို့ ကယ်ကြပါဦး " စူးစူးဝါးဝါး အောလိကုေ်သာအသံသည် ကျွနပု တ်ို့ တည်းခိရုာ အိမမ်ှ ၂ အိမ်ေကျာ်လောက် ဖြစ်သည်ဟု ခန်မ့  နှ်း ရလေသည် ။ သိနု့ ငှ့် ကျွန်ုပတ်ို့ နှစဉ်ီး လည်း အိမ်ေပါ်မှ အမြန်ဆင်းကာ အသံလာရာဆီသို့ ပြေးထွက် ခြဲ့ ကလေတော့သည် ။ အသံလာရာဆီကို ရောက်တော့ လူများက ၀ိငုးအံ၍ုကြည်နေ့ကြလေသည် ။ " ကဲကဲ ခဏလောက်လမ်းဖယ်ပေးပါခင် ကျွန်တော်တို့ ကြည့်ပါရစေ " ကျွန်ုပက်ပြောပြောဆိဆို လူအပုထ်သဲို့ ပြေးဝင်လကို သ်ည် ။ လူအုပြ် ကီးက ကျွနပ်ု တ်ို့ နှစဉ်ီး အား လမ်းဖယ် ပေးကြလေသည် ။ သတိလစ်သော မိန်း ကလေးအား စမ်းသပ်ကြည်လ့ကိုေ် သာအခါ အသက်ပျောက်နေပြီ ဖြစ်သည် ။ ဒေါက်တာနိုင်ေဇာ်က " အင်းဗျာ စိတ်ေတာ့ မကောင်းပါဘူး လူနာက အသက်မရှေိတာ့ပါဘူး ဘယ်လြုိ ဖစ်တာလည်း ပြောပါဦးဗျာ "
" ဗျာ..ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ ညီမလေးရယ် ..ဒီလပိုါဗျာ ထွေးညိုက လွနခ်တဲ့ နှစရ်က်ထကဲဗိကု အရမ်း အောင့် နေပါတယ် ။ ဆရာလေးတိကုို့ သွားပြဆိေုတာ့လည်း ရှကလ်ုိ့ မပြရဲဘူး တဲ့ ဒီမနက်ကြတော့ ၀မ်းတွေလည်း အရမ်း သွားပါတယ် ၀မ်းသွားတော့ ဆံပင်ချည်တွေလည်း ပါလာပါတယ် ဗိကုလ်ည်း အရမ်းအောင်ြ့ ပီး သွေးတွေလည်း မြင်မကောင်းလောက်အောင် ဆင်းပါတယ် ဒါနဲ့ သူလည်း ဗိကုက်ို ဖိပြီး
သတိလစ်သွားရတာပါခင်ဗျာ " " အင်း ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေဗျာ မရှကသ်င်တဲ့အရာကို မှဗျာ.." " တောက်..ဒါ ဟို မိန်း မကြီးလက်ချက်ပဲ ဖြစ်ရမယ် ဒင်းပြုစားလို့ ဆံပင်ချည်တွေ ပါတာဖြစ်ရမယ် " " ကဲ ကဲ..ခဏလေး
နေပါဦးဗျာ ဘာကြောင်သေ့ရသလဲဆတိုာကျွန်ေတာ်တို့ ဖော်ထတုေ်ပးပါ့မယ် ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတိဖု့ က် က တစ်ခကုညူရီမယ် ခင်ဗျားနဲ့ ဒီမနိ်း ကလေးက ဘာတော်သလဲဗျ " " ကျွန်တော့် ညီမ ၀မ်းကွပဲါဆရာ " "
ကဲဒါဆို ကျွန်ေတာ်တစ်ခေုပြာပြမယ် ကျွန်ေတာ်တို့ အမှနတ်ရားပေါ်အောင် ဖော်ထတုေ်ပးပါ့မယ် ဒါပေမယ့် ဒီအလောင်းကို ရင်ခွဲစစ်ဆေးဖို့ (Post Modern ) လုပဖ်လိုို့်ပါတယ် ...အဲဒါပြုလုပဖ်ို့ ကျွန်ေတာ်တကိုို့ ခွငြ့် ပုပါ "
ရွာသားများအားလံုး အတန်ကြာ တိတဆ်တိသ်ွားကြ၏ ။ အတန်ကြာမှ သေဆုံးသူမနိ်းမပျို၏ အစ်ကကို " ခွငြ့် ပုပါတယ် ဆရာတို့ ကြိုက်သလိလုပုပ်ါ အမှနတ်ရားကို သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ "
ဟုပြောလေသည် ။ သုနှိ့င့် ကျွနပ်ု တ်ို့ နှစဉ်ီး ၊ သေဆံုး သူမနိ်း ကလေး၏ အစ်ကို ၊ သူကြီး နှင့်
ရွာသူရွာ သားအချို့ တိကုို့ ခေါ်ဆောင်ကာ ရင်ခွဲစစ်ဆေးခြင်း ( PM ) အား ရွာ၏ထံုး စံအရ ရွာထဲတငွ် ပြုလုပရ်န် မဖြစ်နုငိ် သော ကြောင့် ရွာ မြောက်ဖက်ရှိ ကျောက်ကလပ်များ ရှိရာသို့ အလောင်းအားသယ်ဆောင်ကာ ထွကလ်ာ ခဲလေ့ တော့ သည် ။ (၇) မွန်းတည့်ချိန်ရောက်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း အပူရနှိ က်ပူသင်သ့လောက် မပူပဲ ကောင်းကင်တစ်ခငွ် အံဆု့ ငိုးကာ နေသည် ။ လူသေအလောင်းအား ရွာမြောက်ဖက်ရှိ ကျောက်ကလပ်ကြီးတစ်ခေုပ်ါတင်၍ ကျွန်ုပက်စတင်ပြီး ရင်ခွဲစစ် ဆေးခြင်း (PM) ကို စတင်၍ ပြုလုပ်ေလသည် ။ ကျွန်ုပ၏်ဓါးသွားက
အလောင်းကောင်၏ ၀မ်းဗိကုအ်လွှာများကို တစ်လွှာ ပြီး တစ်လွှာ ဖြတ်သန်းသွားလေသည် ။ မကြာမီ ၀မ်းဗိကုအ်တွင်းမှ ပုပအ်က်အက် အနံမ့ျားနှငအ့် တူ အရည်များ စီးကျလာသည် ။ အရည်များကို
ဖယ်ရှားပြီးသည်နငှ့် တွေလ့  ကို ရ်သော မြင်ကွင်း ကြောင့် ရွာသားအားလံုး ကြက်သေသေသွားကြသည်။ မြင်ကွင်း ကား ၀မ်းဗိက်ုအတွင်း ရှိ သားအိမ် ၊ သားဥ အိမန်ငှ့် အူနရံမျာံးတွင် ဆံချည်မျှင်များ သွားများ ၊
အရိုး များ တွယက်ပ်နေကြခြင်းပင် ဖြစ်သည် ။ ကျွနပ်ု တ်ို့ နှစဉ်ီး မှာ ထြို မင်ကွင်း ကို မြင်လကိုရမှ သက်ပြင်း ချနိုငြ် ကပေသည် ။ ရွာသားများကား လွနစ်ွာ ကြောက်ရွံ့ ထိတလ်န့် နေကြသည် ဖြစ်ရာ စကားပင် မပြောနိုငရ်ှာ ပေ ။ သိနှု့င့် ဒေါက်တာနိငုေ်ဇ်ာက
" ကဲက.ဲ .ရွာသားများခင်ဗျား အခုဆရို င် အဖြေမှနက်ို သိရပါပြီ အခုတော့ အလောင်းကို ပြန်ပတိလ်ကို ရ်အောင် ရွာ ရောက်တော့ ကျွန်ေတာ်တို့ ရှင်း ပြပါ့မယ် " ဟုပြောလိက်ုလေသည် ။ သိနှု့င့် ကျွနပ်ု လ်ည်း ရွာသားများကို ရှင်း ပြရန် သားဥအိမက်ို ယူဆောင်ပြီး
၀မ်းဗိကုက်ို ပြန်ပတိက်ာ ရွာ၏ ထံုး စံအတိငုး ကျောက်ကလပ်ပေါ်တွင် တင်၍ ပြန်ခြဲ့ ကလေတော့သည် ။ ရွာလူကြီး၏ နှိုးဆော်မှုဖြင့် သူကြီးအိမတ်ငွ် တစ်ရွာ လုံးနီးနီး စုရုးံ နေကြလေ၏ ။ ဒေါက်တာနိငုေ်ဇ်ာကစ၍ " ဒီလပိုါခင်ဗျာ အခုဒရွီာ လေးမှာ ခဏခဏ အဖြစ်များနေတဲ့ ဆံပင်ချည်တွေ အန်တယ် ဆံပင်ချည်တွေ ၀မ်း သွားတယ် ဆိတုာ တကယ်တော့ စုန်း ကဝေ အတတ်နဲ့ ဘာမှ မဆိုငပ်ါဘူးခင်ဗျာ ။ ဒီသားဥအိမက်ို ကြည့်ပါ ခင်ဗျာ ။
ဒါဟာ ရောဂါတစ်ခေုကြာင့် ဖြစ်ရတာပါ ။ လူသားတွေဟာ မမွေးဖွားခင်တနုးက မိခင်ဝမ်းဗိကုထ်မှဲာ Ectoderm , Mesoderm , Endoderm ဆိတဲု့ အလွှာသံုး လွှာကနေ ပေါင်းစပ်ပြီး လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရတာပါ ။ အလွယန်ား လည်အောင် ရှင်း ပြရရင် အဲဒလီို ပေါင်းစပ်တဲ့အခါ မှာ တစ်စတုံ စ်ခု မှားယွင်း ပြီးတော့
အရေပြားအောက်မှာ အရေ အိတက်လေးတွေပါလာပါတယ် ။ ဒီအတိက်လေးတွေကို ခွစဲတြိ် ပီးတော့
လည်း ဖယ်ရှားပစ်လု့ရိပါတယ် ။ ဒီအတိက်လေးတွေကို Dermoid Cyst လိေု့ ခ်ါပါတယ် ။ ဒီကောင်က တစ်နည်းပြောရရင် အဲဒအီရေ အိတရ်တှိေဲ့ နရာမှာ ပုံမမှနတ်အဲ့ ရာတွေ ဥပမာ သွားတွေ ၊ ဆံပင်ချည်တွေ ၊ အရိုး တွေ စသဖြင့် လာပြီး တွယ် ကပ်ငြိပါတယ် ။ ဒီအရေအိတဟ်ာ ၀မ်းဗိကုပ်ငိုး မှာ တည်ခမဲ့ ယ်ဆရို င်
သားဥအိမ်ေတွ ၊ သားအိမ်ေတွ အူတွေမှာ တွယန်ငိုပါတယ် ။ ဒါကို Teratoma လိလု့ ည်းခေါ်ပါသေးတယ် ။ အခု ဒီသေသွားတဲ့ ကလေးမလေးဟာ သားဥအိမမ်ှာ Teratoma ဖြစ်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီသားဥအိမ် ပေါက်သွားတဲအ့ခါ ဗိက်ုအလွနအ်မင်းအောင်ြ့ ပီး သွေးတွေဆင်း ပြီးတော့ ပိုးဝင် ( Infection )ခြင်း
ကြောင့်ဝမ်းတွေသွားပြီး သွေးလန့် ( Shock ) ကြောင်ဆုံ့းရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ Dermoid Cyst တွေဟာ အရေပြားအောက်က မည်သည်နေ့ရာမှာမဆို ဖြစ်ပွားနိုငပ်ါတယ် ။ သူက့ို ကုသချင်တယ်ဆရို င်တော့ ခွစဲတြိ် ပီး ဖယ်ရှားမှသာ ရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီDermoid Cyst တွေဟာ ဒီတစ်ရွာ တည်းမှာ ပဲ
ဘာကြောင့် အဖြစ်များစေသလဲဆတိုာကတော့ မကြာခင် ကျွန်ေတာ်တို့ စံစုမ်းဖော်ထတြု ပီး ပြောပါ့ မယ်ခင်ဗျာ "
" ဟယ်ထူး ဆန်းလိကုတ်ာ တစ်ခါမှ မကြားဖူးပါဘူး " " ဟုတပ်ါ့အေ ကျုပ်တို့ ဖြင့် ဟိမုနိ်း မတွေ ပြုစားတယ်ပဲ ထင်နေတာ ခုမပှဲ ရှင်း သွားတော့တယ် " စသဖြင့် တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ပြောဆြို ကလေသည် ။ ပြီးနောက် ကျွနပ်ု တ်ကိုို့ အမှနတ်ရားကို သိခငွ့်ရ သည့်အ တွက် အထူးပင် ကျေးဇူးတင်နေကြပြီး စိတရ်ငှ်း လင်းစွာ အသီးသီး ပြန်သွားကြလေတော့သည် ။ " ကိသုက်တန်ေ့  ရ ဒီ Disease ရဲ့ Cause ကိေုတာ့ ရှာမှ ဖြစ်မယ်ဗျို့ ဒါဟာ ရွာသားတွေရဲ့ Lifestyle န့လဲည်း ပတ်သတ်နေမှာပဲ သူရ့့ဲ Source ကို ရှာရမယ်ဗျို့ "
" ဟုတပ်ါ့ကနို ငိုေ် ဇ်ာရေ ကျွန်ေတာ်လည်း အဲဒလီိုပဲ တွေးမိတာပဲ ဒီရွာ မှာ ဘာကြောင့် Dermoid Cyst တွေ အဖြစ်များနေပါလိမ့် " (၈) သိနု့ ငှ့် ကျွန်ုပတ်ို့ နှစဉ်ီး လည်း တောင်တောင်အီအီ စဉ်းစားပြီး အတွေးနယ်ချဲေ့  နမိလေတော့သည် ။ ညနေ စောင်း နေ၀င်ချိနတ်ငွ် လူဘ့  လီူး ကြီးအား စံစုမ်းရန် ကျောက်ကလပ်များ ရှိရာသို့ တစ်ခေါက် သွား
ရောက်ခြဲ့ ကသေးသည် ။ သိေု့ သာ် ယင်းကားပေါ်မလာပါချေ ။ ဤတွင် ရွာရြှိ ပုစားသူများ အကြောင်းလည်း ဖော်ပြရန် လိုပေသည် ။ ယင်းတိကု့ား ကျွနပ်ု တ်ို့ နှစဉ်ီး ရွာကလေးသို့ စစရောက်ခြင်းနေ့တငွ် နှစြ် မို့ဟန်
မရှခြိဲ့ ကချေ ။ အချို့ကား စုန်း တိကုမ်ည် ကဝေတိကု၍်မောင်းထုတပ်စ်မည်ဟု ကွယရ်ာတွင် ခြိမ်း ခြောက်
ခဲ့ကြသေးသည် ။ သိေု့ သာ် ကျွန်ုပတ်ို့ နှစဉ်ီး ကား စုန်း ၊ ကဝေ ၊ ပြုစားခြင်း အတတ်များကို အယံအုကြည်မ ရြှိ ကသူများ ပီပီ ၄င်းတိ၏ု့ စကားများအား ဂရုစကို ခ်ြဲ့ ကခြင်း မရှခိဲ့ပေ ။ ကျွန်ုပတ်ို့ နှစဉ်ီး လည်း ဇွေဲကာင်ကောင်းနှင့် နောက်တစ်နေ့ ညတွင် ကျောက်ကလပ်များ ရှရိာသို့
တိတတ်ဆိတ် ထွကခ်ွာခြဲ့ ကလေတော့သည် ။ ဒေါက်တာနိင်ုဇော်ကား လက်စွဲတော် သေနတ်နငှ့် ကျွန်ုပတ်ငွက်ား ခြေနှစေ် ချာင်းတွင် ကပ်လျှ က် ချည်ထားသော ဓါးမြှောင်နှစ်ေချာင်းသာလျှင် ပါရှေိလသည် ။ သိနု့ ငှ့် နာရီပြန် တစ်ချက် တီးခါနီးသောအခါ ကျွန်ုပတ်နိှု့စဉ်ီး လည်း စိတ်ေလျာ့စပြုလာလေသည် ။
ခြင်မကှမ်ျားကလည်း ကျွနပ်ု တ်ို့ နှစဉ်ီး အား လွနစ်ွာ နှပိစ်က်ကြကုန၏်။ ထိအုခိကု မဲမသဲဏ္ဍာန်ကြီးကား ယမန်နေ့က ကျွန်ုပတ်ို့ တင်ထားခဲသေ့ာ အလောင်းကောင်ကြီး ရှရိာသို့ ချဉ်းကပ်လာလေသည် ။
ဒေါက်တာနုင်ိဇော်က ထွက၍်ရင်ဆုငိမ်ည် ပြုရာ ကျွန်ုပက်တားလိကြု ပီး အမှောင်ထမှဲ ကျွနပု်၏
ဓါးမြှောင်တစ်လက်ကို ဆွယဲလူကိုြ် ပီး မဲမဲ သဏ္ဍာန်ကြီး၏ ခြေထောက်ရရှိာသို့ ပစ်လကိုေ် လသည် ။ " ၀ှီး " " ဒုတ"်
ဓါးမြှောင်က ပစ်မတှဆ်သီို့ တည်တ့ည်စ့ကိုဝင်သွားဟန်တ၏ူ။ မဲမသဲဏ္ဍာန်ကား ခွေကျသွားပြီး ပြန်မထ
နုငိေ်တာ့ပေ ။ ကျွန်ုပတ်နိှု့စဉ်ီး လည်း လျှင်မြန်စွာ ပြေးသွားပြီးလျှင် ယင်းမဲမသဲဏ္ဍာန်အား ညှပ၍်ဖမ်းလိကု လေ သည် ။ အလိ.ု ..မဲမသဲဏ္ဍာန်ကား အခြားမဟုတ် ကျွန်ုပတ်လိုို့ လူသားစစ်စစ် ပင်ဖြစ်လေ၏ ။ ယင်း၏
ပေါင်တငွ် ကား ကျွန်ုပ် ပစ်လကိုသော ဓါးမြှောင်ကားနစ်ဝင်လျှက် ။ သို့သော် ထိလုကူား သာမန်လတူထို့ က် ကြီးထွား နေသည်ကား အြံ့ သစရာပင် ။ အသားအရေတိကု့ ရိရွဲလျှက် ရြှိ ပီး မျက်နှာက အထွတ်အထွတမ်ျားနှင့် ။ " ခင်ဗျား ဘယ်သလူည်း ဘာလို့ ဒီအလောင်းကောင်တွေကို လာစားနေရတာလဲ " ဒေါက်တာနိင်ုဇော်က သေနတ်နငှခ့်ျိနြ် ပီးမေးလိကုရ်ာ ထိလုဘူ့ လီူးကြီးက " ဟုတ.် .ဟုတက်ဲ့ ခဏလေးပါခင်ဗျာ ကျုပ်အကြောင်းကို အပြည့်အစုံ ပြောပြပါ့မယ် အခုဒဓီါးကိုတော့ နှတုေ်ပး ပါဗျာ နာလွန်းလိပု့ါ"
ဟုပြောရာ ကျွနပ်ု လ်ည်း ဓါးမြှောင်ကို ဆွဲနှုတ်လကိုြ် ပီး လက်ကငိုပ၀ုါနှင့် သွေးတိကုေ်အာင်ဆကို့ာဆီးပေး လိက်ုလေသည် ။ " ဒီလပိုါခင်ဗျာ ကျုပ်နာမည်က ဘဒင်ပါ ကျုပ်က အရင်ကတည်းက ဒီရွာနဲမ့  တည်လို့ ရွာပြင်မှာ
တစ်ယောက် တည်း နေတဲသူ့ပါ ကျုပ်က အရက်ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက စသောက်ခပဲ့ါတယ် ရွာအပြင်က တဲမှာ အရက် သောက်ပြီဆုရိင် တောပစ်ပြီး ရလာတဲ့ တောကောင်သားတွေနဲ့ မြည်းလေ့ရပှိါတယ် ..
တစ်နေ့တော့ ကျုပ် ဘာသား ကောင်မှ ရမလာခဲဘူ့း ဒါနဲ့ အရက်ချည်းပဲ ဇွတမ်တှိေ် သာက်ခတဲ့ ယ် ။ ဒီလနိုဲ့ ရေချိနက်ကို လ်ာတဲအ့ခါမှာ ကျုပ်ရင် တွေ ပူလနွ်းလို့ အမ်ြညးရှာမယ်ဆြို ပီး ထွကလ်ာခဲပ့ါတယ် ။ ဒါနဲ့ တောင်ကလပ်တွေနားလည်း ရောက် ရော တောကောင်တစ်ကောင်သေနေတာတြွေ့ ပီး ကျုပ်လည်း
အားရ၀မ်းသာနဲ့ မီးကင်ပြီး မြည်းခဲပ့ါတယ် ။ နောက် တစ်နေ့ ကျုပ်နိးု လာတော့ ညက ကျုပ်မြည်းခဲတ့ာ တောကောင်မဟုတပ်ဲ လူသေအလောင်း ဖြစ်နေ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အရသာက ထူးလွန်း လို့
ကျုပ်စလွဲ မ်းခဲ့မပိါတယ် ။ ဒါနဲ့ နောက်ပငိုး ရွာက လူသေတွေ လာပစ် တိငုး ကျုပ်ခိးု ပြီး စားခဲပ့ါတယ် ။
နောက်ပုငိ်း အစိမ်း စားတဲအ့ဆင့် ထိရောက်လာခဲပ့ါတယ် ။ မစားရမနေနိငုလ်ို့ လူသေ တွေ လာမပစ်လို့ ကြာသွားတဲအ့ခါ ရွာမြောက်ပုငိ်း အစွနက်ကလေးတစ်ယောက်ကေို တာင် ကျုပ်...ကျုပ် ..သတ်ပြီး
စားမိပါတယ်ဗျာ လူသားစားတဲနေ့ကစပြီး လူလည်း ဖောသွပ်ေယာင်ကငိုးလာခဲ့ပါတယ် ။ တစ်ကယိုလုံး အဖုအပိမ့်တွေ ထွကြ် ပီး အသားအရေလည်း ရိရွဲလာခဲပ့ါတယ် ။ အခုခင်ဗျားတို့တွေတ့  အဲ့ တိုင်း ခန္ဓာကိယုက်ကြီးထွားနေတာပါပဲ " ဟု ရှညလ်ျှားစွာ ရှင်း ပြလေသည် ။ ထိအုခါမှ ကျွနပ်ု တ်လို့ ည်း လူသေအလောင်းများ ပျောက်ဆုးံ နေခြင်း အဖြေကို တိတကျိကျ သိရလေတော့သည် ။ သို့နငှ့် ကျွနပ်ု တ်လို့ ည်း ဘဒင်အား ခေါ်ဆောင်ကာ သူကြီးထံသို့
အပ်နလှံ ကိုေ် လသည် ။ ရွာသူရွာ သားများအားလည်း ခေါ်စေ၍ ဘဒင်အကြောင်းကို
ရှင်း ပြလိကုေ်လတော့သည် ။ ထိအုခါမှ ရွာသူရွာ သား များစိတတ်ွင် တစ်ချိနလ်ုးံ ခြောက်လနှေ့် နခဲ့သော လူသားစား သရဲအကြောင်းကို ရှင်း ရှင်း လင်းလင်း သိသွား ကာ " ဟင်း " ချနိုငြ် ကပေတော့သည် ။ ကျွန်ုပတ်ို့ နှစဉ်ီး အားလည်း ကျေးဇူးအထပ်ထပ် တင်နေ ကြပေ တော့ သည် ။
သိနု့ ငှ့် ကျွန်ုပတ်ကို့ား နောက်ဆုးံ ပြသာနာ တစ်ခကုသိုာဖြေရှင်း ရန်ကျန်ပေတော့သည် ။ နောက်ရက်များမှစ၍ ကျွန်ုပန်ငှ့် ဒေါက်တာနိငုေ်ဇ်ာတသို့ ည် Dermoid Cyst အဖြစ်များခြင်း၏ အကြောင်းကို လိက်ုရှာကြရာ တစ်ပတ် တိတိ တိုင် အောင်အစရှာမရပဲ ဖြစ်နေလေတော့သည် ။ တစ်နေ့သောအခါ
ကျွန်ုပတ်ို့ နှစဉ်ီး သည် စိတ်ေပြ လက်ပျောက် ငါးမျှားရန်အတွက် ရွာတောင်ဖက်ရှိ စမ်းချောင်းလေးသို့ ရောက်လာခဲတေ့ာ့သည် ။ စမ်းချောင်းသို့ ရောက်သောအခါ ဒေါက်တာနိငုေ်ဇ်ာက
" အလိ.ု . ကိသုက်တန်ေ့  ရ ဒီစမ်းချောင်းက ကြည်လချှည်လားဗျို့ အောက်ခြေကို မြင်နေရတယ် ဟိုအောက် ခြေက ကျောက်တုးံ ဖြူဖြူကြီးတွေက ဘာကျောက်တွေတနုး " " မသိဘူး ဗျ ဆင်းကြည်ရ့မှာပဲ " ဟု ကျွနပ်ု က်ပြောပြောဆိဆို ငါးမျှားတံများချပြီး ရေထဲသို့ ဆင်းလိကုေ်လသည် ။
စမ်းချောင်းဟုဆေို သ်ာလည်း ရေအောက်ကြမ်းပြင်ထဆိလျှို င် အတောင် ၂၀ မျှ နက်ပေသည် ။ ကျွန်ုပလ်ည်း ရေအောက်ကြမ်းပြင်ထငိပုက်ာ ကျောက်တုးံ တစ်တုးံ ကို သယ်ယခဲူ့လေသည် ။ ကမ်းစပ်သု့ေိရာက်လျှ င် ကျွနပ်ု တ်ို့ နှစဉ်ီး စလံုး လွနစ်ွာအံအ့ား သင်သ့ွားကြလေသည် ။
အဘယ်ေ့ကြာင်ဆ့ေို သာ် ထိေုကျာက်တုးံ ကား တစ်ချိနက်ကျွနပု တ်ို့ နှစဉ်ီး ပေါင်း၍ သုတေသန
ပြုလုပခ်ဖဲူ့းသော Arsenic ဟုခေါ်သော ဓါတ်ငွေ့ အဆိပတ်စ်မျိုးထွကသ်ည့် ကျောက်ပင် ဖြစ်လေ သည် ။ ထိအုခါမှ ကျွနပ်ု တ်လို့ ည်း ပြသာနာကြီး၏ အဖြေကို နှစဉ်ီး စလံုး ရိပမ်သွိားလေတော့သည် ။ သိနှု့င့် ကျွန်ုပတ်ို့ နှစဉ်ီး လည်း ကျောက်တုးံ ကို ယူကာ သူကြီးအိမသ်ို့ ထွကခ်ေဲ့ လတော့သည် ။ (၉) သူကြီးအိမသ်ို့ ရောက်သော် ရွာသူရွာ သားများအား စုဝေးစေ၏ ။ ထိေု့ နာက် ကျွနပ်ု က်ပင်စတင်၍ " ရွာသား တွေကို ခေါ်ရခြင်းအကြောင်းကတော့ ဒီရွာ မှာ ဆံပင်ချည်တွေအန်တယ်ဆတိဲု့ Dermoid Cyst ရောဂါ အဖြစ်များ စေတဲ့အကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ တွေရ့  ခှိ ပဲ့ါပြီ ရွာသားတွေကို တစ်ခေုမးချင်တာက သောက် ရေသုံးရေတွေကို ဘယ်ကရပါသလဲ "
" ရွာတောင်ပငိုး က စမ်းချောင်းက ရတာပါဆရာ " ရွာသားများက ၀ိငုး ဖြေကြ၏ ။
" ဒါဆို ဒီစမ်းချောင်းက အဓိက တရားခံပါပဲ ဒီလပိုါကျွန်ေတာ်တို့ ဒီစမ်းချောင်းအောက်ခြေကနေ ဒီကျောက် တံုး ကို ရရှိခတဲ့ာပါ ဒီလေို ကျာက်တုးံ မျိုးတွေ ရေအောက်ကြမ်းပြင်မှာ အများကြီး ရှေိနပါသေးတယ် ။ ဒီကျောက် တုံးမျိုးတွေ ရေအောက်ကြမ်းပြင်မှာ အများကြီး ရှေိနပါသေးတယ် ဒီကျောက်တုးံ က
အလွနအ်န္တရာယ်များတဲ့ Arsenic ဆိတဲု့ အဆိပဓ်ါတ်ငွေရ့  ည် တစ်မျိုးကို ထုတ်ေပးတဲကျေ့ာက်ပါ ။ ထုတလ်တွှတ်ဲ့ ပမာဏ နည်းတဲ့အတွက် သောက်သုးံ သူအချို့မှာ ဘာလက္ခဏာမှ မပြပေမယ့် ဒီကောင်က အချို့လူတွေမှာ အဆိပအ်တောက်ဖြစ်စေပါတယ် ။ Dermoid Cyst ဟာ မိခင်ဝမ်းထဲမှာ ကတည်းက အလွှာသံုး လွှာပေါင်းစည်းမှုမှာ မှားယွင်း ပြီး အရည်အတြိ် ဖစ်ပေါ်လာတယ် ဆိုပေမယ့် ဒီ Arsenic နဲ့ တွေမ့  သှာလျှင် အလွနလ်ျှင်မြန်စွာ ပွားများတဲ့ Teratoma အဆင်ကို့ ရောက်ပါတယ် ။ ဒီရေကို
သောက်နေကြတော့ Dermoid Cyst အခံရတှိဲ့ အချို့မိန်း မတွေမှာ Teratoma အဆင်ေ့ပြာင်းပြီး
ဆံပင်ချည်တွေအန် ဗိကုေ်တွအောင်ြ့ ပီးသေဆုံးရတာပါပဲ ဘာပြုစား တာ စုန်း ကဝေ ကြောင်မှ့ မဟုတပ်ါဘူး ခင်ဗျာ ဒီစမ်ချောင်းကိလုည်း အခုကစပြီး အသံုး မပြုပါနဲ့ ရေတွင်း ရေကန်တူး ပြီး အသံုး ပြုစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ "
ဟု ရှင်း ပြလိက်ုသောအခါ ရွာသူရွာသားများအားလံုး တအံတ့သြ ဖြစ်ကြလေသည် ။ " ဟင်း...တော်သေးတာပေါ့ဗျာ ဒီရေတွေ ဆက်သောက်နေလိကု့ တော့ တစ်ရွာ လံုး မျိုးပြုတ်ကနုမ်ှာ ဆရာတို့ ရောက်လာ ပေလို့ပဲ ဗျာ ..ဆရာတို့ နှစ်ေယာက်ဟာကျုပ်တို့ တစ်ရွာ လံုး ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်ေတွပါဗျာ " ဟုသြူ ကီးကပြောလေသည် ။ သုနှိ့င့် တစ်ရွာလုံးက ကျွနပ်ု တ်ို့ နှစဉ်ီး အား ၀ိငုး၍ ကျေးဇူးတင်ကြလေတော့သည် ။ (၁၀) နောက် တစ်နေ့ရောက်သောအခါ ရွာမှာ အေးချမ်းသွားပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပတ်ို့ နှစဉ်ီး လည်း ခရီးဆက်ထကွေ်တာ့မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောလေရာ တစ်ရွာလံုး က မျက်ရည်စက်လက်နငှ့် ၀ိငုး ပြီး ပိေု့ ဆာင်ကြရှာလေသည် ။ ဘဒင်အား သူကြီး က ရွာ၏ထုံးစံအရ မည်သုိ့ စီရင်လကို သ်ည်ကို
ကျွန်ုပတ်နိှု့စဉ်ီး မသိရခှိေဲ့ ပ ။ ဤသြို့ ဖင့် စောကလုံ ရွာလေး အား နောင်တငွ် မိစ္ဆာရွာဟု မည်သမျှူ
မခေါ်တွငြ် ကတော့ပဲ " စောကလံရွုာ " ဟုသာ ပြန်လည်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီး ရွာကလေးသည် အယူဝါဒလွမျဲား စုန်း ၊ ကဝေ ယြုံ ကည်မမျှုား ပပျောက်ကာ အေးချမ်း သာယာ လေတော့ သတည်း....။ ( မှတခ်ျက် ။ ။ Dermoid Cyst ၏ ဖြစ်စဉ်မှာ မွေးရာပါဖြစ်ခြင်း သားဥအိမတ်ငွ် ဆံပင်ချည်များ ၊ သွားများ ၊
အရိုး များကပ်ပါခြင်း စသော လက္ခဏာများ ဖြစ်သည့် Teratoma ၊ အရေပြားအောက်တငွ် မွေးကတည်းက အိတက်လေး များ Cysts များပါရှလိာခြင်းတိမု့ှာ အမှနြ် ဖစ်သော်လည်း ကျန်သည့် အပိငုး များမှာ ဇတ်လမ်း
သဘောအရ ဖြည်စ့ကွထ်ားခြင်း ဖြစ်သည် ။ ကျေးလက်တောရွာများ၏ စုန်း ၊ ကဝေ ၊ ပြုစားခြင်း အယူအဆ လွမျဲားအား တင်ပြလြို ခင်းသာ ဖြစ်ပေသည် ။ )
I and matesar villag
(၂) ကျွန်ုပ်နှင့် မိစ္ဆာရွာ ( အပိုင်း ၁) " အားပါး အတော်လေးသကွာ ၂ ယောက်စာမို့ထင်တယ်ကွ " " အေးကွာ နန်းမူသနားပါတယ် သူ့ခမျာ မီးမဖွားနိုင်လို့သာေ...